Farqiga canshuuraha dadka laga qaado oo kordhay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiiradda sinnaanta ragga iyo dumarka Maria Arnholm.. Sawirle: Björn Holgersson/Sveriges Radio
Farqiga canshuuraha dadka laga qaado oo kordhay
La daabacay fredag 13 september 2013 kl 12.11
Waxaa kordhi doonaa farqiga u dhexeeya canshuurta ay bixiyaan waalidka carruurta guriga ku haya, dadka bukaanka ah iyo dadka shaqada la’ iyo canshuurta ay bixiyaan shaqaalaha caadi ah kolka ay dowladdu markii labaad hoos u dhigto canshuurta shaqada laga bixiyo. Taas oo dowladdu ku talajirto sannadka dambe. Lacagta canshuurta laga jaraayo waxay khuseysaa dadka shaqeeya oo qura.
Tusaale ahaan haddii qof dumar ah oo ilmo yar guriga ku haysa ay soo gasho 22000 oo karoon bishii, waxaa u soo haraya 15400 oo karoon marka canshuurta laga gooyo. Laakiin qofka shaqeeya oo ay bishii soo gasho 22000 oo karoon, waxaa u soo haraya 17000 oo karoon canshuurta kadib. Farqiga u dhexeeyaana wuxuu noqonayaa 1600 oo karoon bishii.
Balse wasiiradda sinnaanta ragga iyo dumarku Maria Arnholm u ma aragto in ay tani tahay dhambaal ay dowladdu u direyso waalidiinta in ay shaqeeyaan. Iswiidhen waxay leedahay caymiska waalidka oo wanaagsan..
- Wasiir ahaan waxaan difaacayaa in la hormariyo in dadka shaqeeya laga dhimo canshuurta maadaama ay dumar badan oo qaata mushahar yar ay fursad u siineyso mushahar sare marka ay shaqeeyaan.